Musharax Jabriil oo ka digay Fargelinta Madaxda Dowladda ee Hannaanka Doorashadda
admin Nov. 23, 2016, 5:28 p.m. 132
Musharax Madaxweyne Jabriil Ibraahim C/lle ayaa hadalkaasi ka sheegay Shir Jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Hoyga uu ka deggan yahay magaalladda Muqdisho, wuxuuna Madashaasi kaga hadlay Arrimo badan oo khuseeya Musharaxnimadiisa iyo Natiijooyinka laga filan karo Doorashooyinka soo socda ee Somalia.
Waxa uu ku eedeeyey Madaxda Dowladda Federalka iyo Guddiga Doorashooyinka Federalka inay jidkii ka weecinayaan Nidaamka Doorashadda, isla markaana ay Doorashooyinka hareeyeen Musuqmaasuq, Laaluush, Caga-jugleyn, in la kala iibsado Codadka iyo in lagu shubto Doorashooyinka ka dhacay Maamul-gobaleedyadda ee lagu soo doortay xubnaha Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare ee Barlamaanka soo socda.
“Musuqa Doorashadda tii ugu xumayd ayaa ka dhacday Dowlad-gobaleeedyadda” ayuu yiri Musharaxa oo rajo xumo ka muujiyey sida loogu kalsoonaan karo Natiijadda Doorashooyinkaasi.
Musharax Madaxweyne Jabriil Ibraahim C/lle waxa uu sheegay inay Faragelinta Madaxda Dowladda Federalka ku hayaan Nidaamka Doorashadda inay horseedi karto colaad hor leh oo kala fogeyn karta Soomaalida iyo Amni darro ku baahda guud ahaan Madiqadda Geeska Afrika.
Musharax Madaxweyne Jabriil Ibraahim C/lle waxa uu walaac xooggan ka muujiyey dib-u-dhac kale oo ku yimaada Jadwalka Doorashadda Madaxtinimadda, wuxuuna xusay inaysan muuqanin inay Doorashadaasi dhici doonto bishan November 30-da, waa sida uu hadalka u yiri.
Dhinaca kale, Musharaxa waxa uu Madaxda Dowladda Federalka ku eedeeyey inay Hantida Qaranka u adeegsadaan Hawlaha Doorashadda, iyadoo aysan Ciiddanka iyo Shaqaalaha Dowladda la siinin wax mushaar ah muddo dhowr bilood.
“Ciiddamadda muddo 9 bilood lama siinin wax Mushaar ah, halka Shaqaalaha Dowladda bilaa mushaar yihiin muddo 6 bilood ah” ayuu yiri Musharax Madaxweyne Jabriil Ibraahim C/lle.
Waxaa kale oo uu carrabka ku dhuftay inay Dowladda xayirtay Mashaariic waa weyn oo la hirgelin lahaa, iyadoo miisaaniyadda Mashaariicdaasi lagu takri-falay.
Xuquuqda Qoraal waxaa iska leh: Radio Dalsan